नेपाल आज | सरकार जुन दलको आएपनि दलाल चरित्र हावी (भिडियोसहित)
३२ वर्ष प्रहरी सेवामा बिताएका व्यक्ति हुन्– पूर्व डिआइजी विजय भट्ट । हाली उनी समाजसेवा र आध्यात्मिक चिन्तनमा लागेका छन् । राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय अस्मितासंग जोडिएका कतिपय विषयले पिरोल्न थालेपछि उनी सडकमा आयोजना हुने विभिन्न प्रदर्शनमा समेत सहभागी हुने गर्दछन् ।
यसपटक भारतको नक्शामा नेपाली भूमि गाभिएको विषयले उनलाई जति पिरोलेको छ त्यो भन्दा बढी यहाँका राजनीतिक दल र नेताहरुको अभिव्यक्तिबाट उनी आक्रोशित छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा राजा महेन्द्रले बेचेको अभिव्यक्ति नेताहरुका मुखबाट सुनेपछि उनी आश्चर्यचकित परेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘राजालाई दोष दिनु प्रोपोगण्डा मात्र हो । यो सबै आफनो कमजोरी ढाकछोप गर्न गरिएको प्रपञ्च मात्र हो । राजा महेन्द्र मात्र होइन ०४६ सालसम्म पनि मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता जोगिएको थियो । राजाको शासनकालमा छिमेकीहरुसंग सन्तुलित सम्बन्ध मात्र होइन, कतिपय मुद्दामा नेपालसामु झुकेको अवस्था पनि थियो । अहिले नेताहरुमा इमान्दारी देखिएन । ’
चाहे भारत होस वा चीन जोसंग भएपनि सीमा विवाद हल गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो । यो विवाद हल गर्न यो कर्मचारी वा सचिवस्तरीय समिति वा प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनबाट हल हुने विषय होइन । साँचो अर्थमा समाधान खोज्ने हो भने प्रधानमन्त्री तहमै छलफल भएर टुंगोमा पुर्याउनु पर्छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच सघन छलफल भए त्यसले केही निकास देला, बाँकी सब हल्ला मात्र हुन् ।
सरकारमा जुनसुकै दल आएपनि त्यो दलाल चरित्रको देखिन्छ । भारत, चीन वा अमेरिका कसैको विरोध गर्दा आफनो सत्ता गुम्छ कि भन्ने चिन्ता उनीहरुमा देखिन्छ । अहिले पनि सीमा विवादबारे सरकार खुलेर बोल्न नसक्नुको कारण सत्ता ढल्छ कि भन्ने भय हो । अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार मात्र छ । जसले शून्य सहनशीलता भनिरहेको हुन्छ, भित्रभित्रै उसैले भ्रष्टाचारमा पूर्ण सहनशीलताको नीति लिइरहेको छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश केन्द्र सबैतर्फ भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचार अन्त्यको प्रयास कहिँबाट पनि भएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारदेखि ठूलाठूला आयोजनाका परामर्शदाता भनिने सबै बिचौलिया हुन् । यीनको काम भनेको कमिशन उठाउने मात्र हो । मनाङमा जनताका लागि अस्पताल बनाउन चीनसंग ४० करोड माग्ने यता आफना लागि बालुवाटार र सिंहदरवारमा करोडौंको भवन शिलान्यास गर्ने । जनतालाई प्राथमिकता कहिले दिए ? जहिले आफूलाई मात्र सुविधा ? राज्यका सबै निकाय र आयोजनामाथि नियन्त्रण जमाएका छन् । रकम उठायो, आपसमा बाँड्यो, खायो । काम गर्नु पर्दैन । राजनीतिक परम्परा र संस्कार यही देखियो । यसरी कसरी हुन्छ ?
एनसेलबाट ६२ अर्ब उठाउने कि मिनाह गर्ने ? दलका शीर्ष नेतादेखि राज्य सत्ताका सबैलाई एनसेलले किनेको छ । भ्रष्टाचार, अपराधजन्य गतिविधिमा संलग्न सबैलाई संरक्षण दिइएको छ । सुडानकाण्डदेखि अफताव आलम काण्डसम्म सबैमा प्रहरीको संग्लग्नता देखिन्छ । सत्य सेवा सुरक्षणम को कशम खाएको प्रहरी नै यस्तो भएपछि कसलाई विश्वास गर्ने ?
अहिले त नेपालमा सबै ठगैठग । यहाँ हरेक मानिस ठगेर एकै दिनमा करोडपति बन्न सक्छ । देशका अधिकांश मानिसहरु ठगी धन्दामा लागेका छन् । अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय पनि अपराधमै लागेका छन् । परिवर्तन कसरी ? देशमा विदेशी चलखेल निकै बढेको छ । भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियनका गतिविधि थामी नसक्नुका छन् । अझ पश्चिमा गतिविधि त झन् हानिकारक छन् । हिजो पश्चिमाहरुकै कारण मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता आयो । उनीहरु यहाँ जातीय नारा उछालेर अझै अशान्ति मच्चाउन तल्लिन छन् । नेपालका लागि ‘इण्डो वेष्ट’ हानिकारक भएकाले यसबाट सतर्क हुन जरुरी छ ।
‘मौसममा ऋतु परिवर्तन जस्तै नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्थितिको ऋतु परिवर्तन हुँदैछ । यसको अर्थ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता अन्त्य हुने स्थिति देखा परिसक्यो । यो राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजाने छ । ’ भट्टको दावी छ ।
राजा प्रधानमन्त्री सल्लाहकार